people Nepal » चीनमा ‘नक्कली लुम्बिनी’ बनाउन नेपाल सरकारले दियो सहमती ! चीनमा ‘नक्कली लुम्बिनी’ बनाउन नेपाल सरकारले दियो सहमती ! – people Nepal
चीनमा ‘नक्कली लुम्बिनी’ बनाउन नेपाल सरकारले दियो सहमती !
चीनलाई पनि नेपाल सरकारले नक्कली लुम्बिनी बनाउन अनुमती दिएको छ । भारतले आफ्नो भुमिमा नक्कली लुम्बिनी बनाएर प्रचार गरेको भन्दै नेपालीमा चिन्ता व्यक्त भइरहेको बेलामा नेपाल सरकारले चीनलाई पनि नक्कली लुम्बिनी बनाउन अनुमती दिने भएको हो । भारतले आफ्नो भुमिमा नक्कली ‘नक्कली कपिलवस्तु’ बनाइसकेको छ ।
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको नेतृत्वमा चीन भ्रमणमा गएको टोलीले चीनलाई नक्कली लुम्बिनी बनाउन सहमती दिएको खुलासा भएको हो । सहमति अनुसार लुम्बिनीमा रहेको मायादेवीको मन्दिर र अशोक स्तम्भ चीनको सिन्चुवान प्रान्तको लशानमा बन्ने भएको छ । उता नक्कली कपिलवस्तु बनाएकै भरमा भारतले गौतम बुद्ध भारतमा जन्मिएको दाबी गर्दै आइरहेको छ ।
सरकारले चीनलाई अनुमती दिएपछि लुम्बिनीको हुबहु नक्कल बनाएर ‘नक्कली लुम्बिनी’ खडा गर्ने चिन्ता उत्पन्न भएको भन्दै जानकारीहरु चिन्तीत भएका छन् । स्रोतका अनुसार सहमति पत्रमा मायादेवीको मन्दिर र अशोक स्तम्भ बनाउने सहमति भए पनि कति आकार प्रकारको बनाउने भन्ने खुलाइएको छैन ।
सिन्चुवान प्रान्तमा सेप्टेम्बर ६ देखि ९ सम्म भएको अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन मेलामा मन्त्री अधिकारीसहितको टोली चीन गएको थियो । भारतले आफ्नो भुमिमा बुद्ध जन्मिएको भनी दाबी गर्दा बिरोध गर्ने नेपालीले चीनलाई नक्कली लुम्बिनी बनाउ दिने सरकारको सहमती पनि बिरोध गर्नुपर्नेमा जानकारहरुले जोड दिएका छन् ।
रियालिटी शो ‘द लिडर’को घोषणा, रवि लामिछाने प्रस्तोता, बाबुरामदेखि रविन्द्रसम्म निर्णायक
पत्रकार/दर्शक कुटपिट प्रकरणः छानबिन गर्न समिति गठन